Somaliland: Muuse Biixi Oo Caddeeyay In Ay Ku Dedaalayaan Sidii Ay Prof. Samatar Ugu Qancin Lahaayeen Xisbiga KULMIYE - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Muuse Biixi Oo Caddeeyay In Ay Ku Dedaalayaan Sidii Ay Prof....
Guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, ayaa shaaca ka qaaday in xisbiga KULMIYE uu aad u danaynayo in ay ku qanciyaan in Prof. Axmed Ismaaciil Samatar uu ku soo biirro xisgoodda.
Waxaanu sheegay in uu qorshaynayo sidii uu kulan ula yeelan lahaa Prof. Samatar oo isagu haatan ku sugan dalka. Isagoo tilmaamay in ay ku dedaalayaan sidii Axmed Ismaaciil Samatar ay ugu qancin lahaayeen in uu xisbiga KULMIYE ku soo biirro, isla markaana ay hal-gan ugu jiraan in ay uga horeeyaan inta aanu xisbiyadda kale gelin.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waan la kulmi doonaa, oo waan ku noq-noqon doonaa, oo waxaan Tab iyo xeelad iyo xoogba isugu gaynayaa in xisbiga KULMIYE uu ku soo biiro Prof. Axmed Ismaaciil Samatar. Mar haddii uu siyaasada hun-guraynayo in uu na taageero, oo kuwa kalena uga dheerayno, oo aanu qancino waa hawsha na hortaala.Waana nin weyn oo Jaamici ah, culayskiisa siyaasadeed ayuu leeyahay, waxaanan hal-gan ugu jirnaa aniga iyo Saylici 9madaxweyne ku xigeenka) in aanu ku qancino in uu KULMIYE nagala shaqeeyo Axmed Ismaaciil Samatar. Waana siyaasi weyn oo xisbiyo dhan ayaa u tartamaya, uguna yeedhi mayno Axmed in uu na taageero mooyee in muran dhexdayada ka dhasho, taa ma aha.”
Muuse Biixi, waxa kale oo uu ka hadlay heshiiska hor-dhaca ahaa ee ay xukuumadu la gashay dawladda Imaaraadka carabta heshiiskaasi oo uu ku tilmaamay mid fursad Dahabiya u ah Somaliland, isla markaanna uu wax ka qaban karro dhibaatooyinka bulshadda haysta sida shaqo la’aanta iyo Tahriibka.
“Aad ayaan u soo dhawaynayaa maalgashiga. Dalkeenuna waxa uu ubaahan yahay maalgashi oo dhibaatooyinka ina haysta ee ay ka mid yihiin shaqo la’aanta, Tahriibta iyo abaaraha soo noqnoqday ee aan u tag waynay ee caalamka nidhaahno na caawiya. Awood dhaqaalena mahayno, haddii aynu helnay maalgashi caalami ah oo waliba dawlad Islaam ah, oo aan ahayn kuwii laga baqayay ee la lahaa u jeedo fog ayay leeyihiin, waa fursad Dahabi ah oo Somaliland loo keenay, maalgashiga dekeda Berbera”ayuu Muuse Biixi oo shalay magaaladda Hargaysa ugu waramayay telefishanka HCTV.
Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga KULMIYE waxa uu ka hadlay wararka la isla dhexmarayo beryahan ee la xidhiidhay in ganacsade C/raxmaan Boore uu qayb ka ahaa heshiiska ay dhawaan Dubai ku kala saxeexdeen Somaliland iyo shirkadda DP world. Waxaanu sheegay in arrintaasi aanay waxba ka jirin,sidoo kalena aanay jirin sabab loogu nisbeeyo in arrintaasi ay dhaawac u gaysan karto xidhiidhka u dhexeeya Somaliland iyo Jabuuti. Waxaanu yidhi
“Qof aan meel isku salaanay xumayn mayno, sawir dawladeed xumayn maayo, meel walba oo la tago waa la isku salaamaa. Markaa Boore ayaa idinla joogay xidhiidhka jabuuti xumyn mayso. Xidhiidhka Jabuuti waxaa xumaynaya wixii dhibaaho ah ee xageena ka yimaada, qof kastoo bani’ aadam ah waa la isa salaami karaa, waa la wada hadli karaan, Boore-na in uu Jabuuti mucaarad ku yahay waan og-nahay. Laakiin C/raxmaan Boore, noolama iman karo wax xumaanta iyo dhibaatada Jabuuti ah.
Haddii uu la yimaadana kama aqbalayno, waanan ka hortegaynaa. Markaa xidhiidhka wadamada jaarka ah naga dhagaxeeyaa waxa weeyi in xageena ka amni iyo is-kaashi ka helaan, oo dhibaatada iska ilaalino, tii uun baa taala. Markaa isma seegi karno Jabuuti. C/raxmaan Boore-na waxa ay saxiib yihiin imaaraadka carabta, iyaga ayaana wada socday anaga mucaaaradad Jabuuti iyo xan Jabuuti mid-na noolama imanayo, mana suur toobayso in uu Somaliland taa la yimaado.”
Somaliland: Guddoomiyaha Guurtida Iyo Mujaahid Cali Gurey Oo Sheegay Inaanu Madaxwayne Siilaanyo Muddo Kordhin Diyaar U Ahayn Iyo Eedda Golaha Wakiillada
Ciidammada Myanmar oo markii u horraysay qirtay in ay muslimiin laayeen
Somaliland: Hoggaamiyaha Xisbiga WADDANI Oo Khudbad Guubaabo Ah U Jeediyay Dad Reer Somaliland Ee Ku Nool Magaalada Bristol